Battery Bank Kaydinta System
cell Battery & pack Battery
xal Power One-stop madal iibsiga. Waxaan ma aha oo kaliya bixiyaan unugyada batari, laakiin sidoo kale waxay bixiyaan batari xal shirka pack.
injineerada khibrad leh oo ka shaqeeya iyo sidoo kale tababar la soo qalab horumarsan, hubi in waxyaabaha our tayada ugu fiican.
On gaarsiinta waqtiga & reply Fast.
baytariyada Our ayaa waxaa adduunka oo dhan deliveryed via UPS / FedEx / express TNT ama by Air / Ocean. doorashada adeeg online Multiple macaamiisha si ay u doortaan via Skype / WhatsApp / wechat / E-mail iyo wixii la mid ah.
1.5v batari dabayn aa
lifepo4 12v batari
Portable 12V 200Ah lithium dabayn fiidmeerta ra'iyi ...
batari Toyota Prius
Dukaan BY BAAHIYAHA MASHRUUCA LAGAA
Battery for Drones, phone smart, afhayeenka Bluetooth iyo alaabooyinka kale ee digital.
Lithium batari polymer ballaaran loo isticmaalo telefoonka Smart, telefoonka gacanta, laptop, afhayeenka Bluetooth, Gudoomiyaha, PDA, GPS, Tracker, Tablet PC, bangiga Power, Drones, boodi Car bilaabo iyo wixii la mid ah.
batari baaskiil korontada 24v / 36v / 48v / 60v / 72v / 96v
batari iftiinka qoraxda iyo batari iftiinka LED
Shenzhen Boye Energy Co., Ltd waxaa la dhisay sanadkii 2011 in Shenzhen City, Guangdong, Shiinaha by Newhop Battery Co., Ltd. Sida horyaal ah bixinta xal xoog, Boye Energy ayaa ku riyaaqay koritaanka saa'idka ah by si dhow ula macaamiisheena ka shaqeeya si ay u horumariyaan batari dhamaystiran iyo alaabta kaydinta tamarta. Boye Energy adeegta spectrum dunida oo dhan ka mid ah macaamiisha warshadaha iyada oo xoog farsamo, waxyaabaha cusub.
Battery Lithium Ion, Lifepo4 Battery Price , Solar Battery Bank , Lithium Ion Battery Pack , Battery Bank , Power Bank Battery , © Copyright - 2010-2019: All Rights Reserved.